Intshayelelo yeQela-iShandong Lanbeisite Izixhobo zeZifundo zeQela Co., Ltd.
Iqela le-OLBEST lasekwa ngo-2005 laza labekwa kuluhlu lwe-NEEQ (i-National Equity Exchange kunye neeKowuteshini) zineekhowudi ezingama-832730 ngo-2015.
Silishishini elinobuchwepheshe obuphezulu obuphuhlisa izixhobo zokufundisa zendalo ezikrelekrele. Sizimisele ukuzisa uthuli-ngaphandle kwendalo, ubhalo oluqondakalayo kunye nezixhobo zemfundo kusapho ngalunye, isikolo kunye nombutho.
Okwangoku, sinabasebenzi abangaphezu kwama-400, amaziko angama-28 asebenzayo kunye nolondolozo, kunye nenethiwekhi yentengiso egubungela amaphondo angama-31 e-China, kunye namazwe nakwimimandla engaphezu kweshumi kwihlabathi liphela.
Sakhe ngempumelelo iworkshop engenamdaka yokuveliswa kweBhodi yeBhodi yeLCD yokuBhala ngo-2016, sidala ixesha lokubhalwa okungenalo uthuli. Ukuphuhliswa kwemveliso okunamandla kunye nemveliso kubeka isiseko esomeleleyo sokukhula okuzayo.
Kwi-2018, iqela lityale i-30 yezigidi zeedola zase-US ukwakha umzi-mveliso kwindawo yophuhliso yaseJinbi, kwiPhondo laseShandong. Le projekthi igubungela ummandla omalunga ne-66, 700 yeemitha zesikwere.
Umgangatho; Inkonzo; Ubuchule
Iqela le-OLBEST lihlala lilandelwa kwifilosofi yeshishini "uMgangatho wokuqala" ukusungulwa kwayo. Sinikezela ngeemveliso ezikhuphisanayo ngokwakha iqela leQC ukuphucula inkqubo yokuhlolwa komgangatho, ukomeleza ulawulo lomgangatho, kunye nokumilisela ukubekwa kweliso.
I-LONBEST ihlala ithathela ingqalelo imfuno yabathengi njenge njongo yenkonzo. Amakhulu abasebenzi anikezela ngenkonzo yobungcali ekumgangatho ofanayo nokomgangatho weenkonzo ezizinzileyo. Okwangoku, inkqubo yolawulo olungqongqo kunye neendlela zovavanyo zilawulwa ukubonelela ngenkonzo yobungcali, ngexesha elifanelekileyo kunye nokusebenza ngokufanelekileyo.
Iqela le-R & D lenze ngokuzimeleyo izixhobo ezininzi zemveliso. Ezi mveliso zifumene inani lamalungelo okuqamba, agcwalisa izithuba ezininzi zobugcisa kwicandelo lezixhobo zokufundisa ekhaya nakwamanye amazwe.
Nenjongo yokuba lelona xabiso libaluleke kakhulu, nelona lihlonitshwayo, kunye nelona shishini lokumakisha libenoluntu.
Siza kuqhubeka ukuthatha iimfuno zabaxhamli njengamandla okuqhubela phambili kwizinto ezintsha, sandise uphando lwetekhnoloji kunye notyalo-mali lophuhliso, kwaye siqhubeke nokubonelela ngemveliso yokhuphiswano, yokusingqongileyo kunye nempilo, izisombululo kunye neenkonzo zemfundo yosapho, ukufundisa kwesikolo kunye neshishini loshishino, ukudala ixabiso kubathengi kunye ube ngowona mniki mveliso uxabisekileyo kunye nomboneleli ngenkonzo kwicandelo lokhuselo lokusingqongileyo ukubhala ngemfundo okrelekrele. Siphakamisa umxholo wexabiso lokuvuleka, intsebenziswano kunye neziphumo zokuphumelela. Sizimisele ukusebenzisana namaqabane ukuvelisa kunye nokusebenza kunye ekwandiseni ixabiso lezemizi-mveliso, ukukhuthaza ukukhula koshishini kunye nokukhuthaza inkqubela phambili kwezentlalo.
Khonza iMfundo, Zuze ikamva
Emva kophuhliso olukhawulezileyo noluzinzileyo ngaphezulu kweshumi leminyaka, I-LONBEST yadweliswa kwimarike ye-NEEQ ngo-2015, yaze yalinganiswa njengenye ye "brand Innovative phakathi kwamashishini ayi-100 aphezulu" ngo-2016. ibhodi kunye nezixhobo zesikolo. Kwixesha elizayo, siya kuseka iqonga lokuthengisa elibanzi ngokusekwe kuphuhliso lweentengiso zehlabathi. Kuya kwaziswa iitalente ezingathethekiyo kunye neetekhnoloji eziphambili. Sijolise ekumiseleni ishishini elilungele ukuphuculwa ngokuphucula intlalontle yabasebenzi ngokwenza uxanduva ngakumbi kwezentlalo nokwenza igalelo kwicandelo lezemfundo nakwimimandla yokubhala.